मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2017-01 > के हामी सस्तो अनुग्रह प्रचार गर्दै छौं?
के हामी "सस्तो अनुग्रह" प्रचार गर्छौं?
हुनसक्छ तपाईंले यो तथ्य पनि सुन्नुभएको छ कि अनुग्रह "असीमित छैन" वा "यसले माग गर्दछ" भन्ने कुरा भनिएको थियो। जसले परमेश्वरको प्रेम र क्षमालाई जोड दिन्छन् उनीहरूले कहिलेकाँही ती मानिसहरूलाई भेट्नेछन् जसले उनीहरूलाई "सस्तो अनुग्रह" भन्ने आरोप लगाउँदछन् किनभने तिनीहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दै बोलाउँदछन्। मेरो असल साथी र GCI पादरी, टिम ब्रासललाई ठीक त्यस्तै भयो। उहाँ "सस्तो अनुग्रह" प्रचार गरेको आरोप लगाइएको थियो। मलाई मनपर्दछ कि उनले यसमा कस्तो प्रतिक्रिया देखाए। उनको उत्तर थियो: "होईन, म सस्तो अनुग्रहको प्रचार गरिरहेको छैन, तर त्योभन्दा उत्तम: नि: शुल्क अनुग्रह!"
सस्तो अनुग्रह भन्ने शव्द ईश्वरशास्त्री डाइट्रिच बोनोफरबाट आएको हो जसले यसलाई आफ्नो पुस्तक "Nachnach" मा प्रयोग गरी यसलाई लोकप्रिय बनाए। उनले यो जोड जोड दिन प्रयोग गरे कि जब कुनै व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्दछ र ख्रीष्टमा नयाँ जीवन बिताउँछ उसले अनुग्रह प्राप्त गर्दछ। तर क्रमिक जीवनको बिना, परमेश्वरको पूर्णता उहाँबाट प्राप्त हुँदैन - त्यस व्यक्तिले केवल "सस्तो अनुग्रह" अनुभव गर्दछ।
प्रभुत्व मुक्ति विवाद
यस बहसमा, दुबै पक्षले राम्रो तर्क प्रस्तुत गरे। मलाई विश्वास छ कि दुबै पार्टीको दृष्टिकोणमा गल्तीहरू छन् जुन त्याग्न सकिन्थ्यो। यो सब भन्दा पहिले येशू र पिताको सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ न कि हामी कसरी परमेश्वरप्रति व्यवहार गर्छौं। यस दृष्टिकोणबाट, यो स्पष्ट छ कि येशू प्रभु र मुक्तिदाता दुबै हुनुहुन्छ। दुबै पक्षहरूले यो अनुग्रहको वरदान भन्दा धेरै बुझ्न सक्दछन् जुन पवित्र आत्माले हामीलाई पितासँग येशूको सम्बन्धमा अझ बढी संलग्न हुन डोides्याउनुहुन्छ।
येशूको कामले हामीलाई उहाँको समग्र अनुग्रह प्रदान गर्दछ
अनुग्रह र कार्यहरूको बारेमा गलतफहमी
अनुग्रहबाट मात्र मुक्ति सम्भव छ: यो शुरुदेखि अन्तसम्म ख्रीष्टको काम हो
हामीलाई बचाउनको लागि पवित्र आत्माको शक्तिमा आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएकोमा हामी उहाँप्रति धेरै आभारित छौं, हामीलाई न्याय गर्नलाई होइन। हामी बुझ्दछौं कि राम्रो कामको लागि कुनै योगदानले हामीलाई धार्मिक वा पवित्र बनाउन सक्दैन; यदि यो भएको भए हामीलाई उद्धारकको आवश्यक पर्दैन। विश्वासबाट आज्ञाकारितामा जोड दिइन्छ वा आज्ञाकारिताको साथमा विश्वास होस्, हामीले हाम्रो उद्धारकर्ता येशूमाथि हाम्रो निर्भरतालाई कहिल्यै हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। उहाँले न्याय गर्नुभयो र सबै पापहरूलाई क्षमा गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई सदाको लागि क्षमा गर्नुभयो - एउटा उपहार जुन हामीले विश्वास गर्छौं र विश्वास गर्छौं भने हामी प्राप्त गर्नेछौं।